UCarnegie Mellon: I-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO
I-Carnegie Mellon GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
I-Carnegie Mellon GPA, i-SAT kunye ne-ACT Graph
I-Carnegie Mellon Yunivesithi ye-GPA, izikolo ze-SAT kunye noMTHETHO Ukwazisa ukuba kwamkelwe. Idatha efanelekileyo yeCapepex.
I-Carnegie Mellon iyunivesithi ekhethileyo eyamkela i-22% yabo bonke abafake izicelo ngo-2016. Ukuze ubone indlela olinganisa ngayo, ungasebenzisa esi sixhobo samahhala eCapepex ukuba ubale amathuba akho okungena.
Ingxoxo yeMigangatho yokuVunywa kweCarnegie Mellon:
Abafundi abanomdla baya kudingeka phantse kuwo onke amabakala "A" kwaye amanqaku okuhlolwa aqhelekileyo aphezulu ngaphezu komyinge ukuba avunyelwe. Kwigrafu apha ngasentla, amachaphaza ahlaza okwesibhakabhaka kunye nohlaza awamkela abafundi, kwaye uyabona ukuba abaninzi abafake izicelo abaye bangena kwiCarnegie Mellon babene "A" imilinganiselo, izikolo ze-SAT (RW + M) ngaphezulu kwe-1300, kunye nemigangatho ye-ACT engama-28 okanye ngaphezulu . Kwakhona uqaphele ukuba kukho ininzi ebomvu efihliweyo phantsi kwebala elihlaza okwesibhakabhaka nokuluhlaza kwikhoneni elingasentla legrafu. Abafundi abaninzi abane-GPA eziphezulu kunye namanqaku okuvavanya bafunyanwe bevela eCarnegie Mellon.
Ukwahlukana phakathi kokwamkelwa kunye nokugatywa kuya kufuthi kuhla kumanyathelo angenani. UCarnegie Mellon unabamkelekile ngokubanzi , kwaye bafuna abafundi abaza kule campus ngaphezu kwamabanga amabakala kunye namanqaku okuvavanya. Incoko yesicelo esiphumeleleyo , iincwadi ezinamandla ezincomekayo , ikharityhulam yekharityhulam ephakamileyo , kunye nemimiselo eyimimangaliso yecandelo elongezelelweyo yiyo yonke into ebalulekileyo yesicelo.
Ukuze ufunde kabanzi malunga neCarnegie Mellon kunye nento efunekayo ukuvunyelwa, qiniseka ukuba ukhangele iprofayile yeCarnegie Mellon Admissions .
Ukuba uthanda uCarnegie Mellon, Unokuthi uthanda ezi zikolo:
I-Carnegie Mellon Yunivesithi iyunivesithi epheleleyo kunye namandla kwizinto ezivela kwimifanekiso emihle kwi-engineering. Oko kwathiwa, eyunivesithi mhlawumbi iyaziwa kakhulu kwiinkqubo zesayensi kunye nobunjineli. Ezinye iikoyunivesithi ezinamandla ezinamandla ezifanayo ziquka iYunivesithi yaseConell (Ithaca, eNew York), iYunivesithi yaseMichigan (uAnnerbor, iMichigan), iYunivesithi yaseRis (eHouston, eTexas) kunye neYunivesithi yaseCalifornia Berkeley .
Ezinye izikolo ezithandwa ngabafake izicelo ze-CMU ziquka iYunivesithi yaseWashington eSt. Louis , iYunivesithi yaseYale, iYunivesithi yaseBoston, iYunivesithi yaseGeorgetown kunye ne- Massachusetts Institute of Technology . Zonke zikhetha kakhulu, ngoko qi ni sekisa ukuba zibandakanya izikolo ezizimbini ezinebhasi ephantsi yokungena kubhaliso lwezikolo oza kuzisebenzisa.
Amanqaku afana neCarnegie Mellon:
Ukunikezelwa kwamandla amaninzi kaCarnegie Mellon, akufanele kumangaliswe ukuba isikolo senze uludwe lwam lwezikolo zobunjineli , iikholeji zaseMpumalanga zase -Atlantic kunye neepolishi zasePennsylvania eziphezulu . Iyunivesithi nayo yanikezelwa isahluko se- Phi Beta Kappa kwiinkqubo zayo ezinamandla kwezobugcisa be-liberal.
Idatha yokuLawulwa kunye noLondolozo lwe-Carnegie Mellon University
Idatha yokuLawulwa kunye noLondolozo lwe-Carnegie Mellon University. Idatha efanelekileyo yeCapepex
Amathuba akho ekungena eCarnegie Mellon ngokucacileyo kukuba awunqwenela ukuba unomlinganiselo oqinileyo "A" we-SAT okanye we-ACT izikolo eziphezulu kwi-1% okanye kwi-2% yabathathi bokuhlola. Qaphela, nangona kunjalo, ukuba namanqaku aphezulu kunye namanqaku okuvavanya akaqinisekisi ukungena.
Xa sihlutha idatha eluhlaza kunye nolwabhakabhaka olwamkelwe kwigrafu phezulu kweli nqaku, sinokubona ukuba kukho ininzi ebomvu (abafundi abachasiweyo) kunye nabafundi abaluhlaza (abaluliweyo) abafundi abajikeleza yonke indlela eya ekhoneni eliphezulu lasekunene igrafu. Ngenxa yesi sizathu, akufanele ucinge uCarnegie Mellon isikolo sokuphepha . Eyona nto ihamba phambili, iya kuba yinto yesikolo , nokuba ngabafundi abanamandla kakhulu. Ukuba irekhodi lakho lezemfundo libandakanya ambalwa amabakala "B" kwaye izikolo zakho zokuhlola ezilinganiselweyo aziyi-stellar, kufuneka ucinge ukuba i-CMU ifike esikolweni .
Ngoko kutheni ngokuqinisekileyo umfundi we-4.0 angafunyanwa kwiCarnegie Mellon? Izizathu zinokuba zininzi: mhlawumbi umfundi unamabanga aphezulu kwizifundo ezilula kunokuba anzima iikhosi ze-AP, IB, ne-Honours; mhlawumbi iileta zokucebisa ziphakanyisiwe; mhlawumbi isicatshulwa soLwazi oluqhelekileyo sicelo asizange sichaze ibali elinyanzelayo; mhlawumbi ukubandakanyeka komfundi kwangaphandle kwangazange kubonakalise ubunkokheli kunye nobunzulu. Kubafaki bezicelo ezifanelekileyo, uphicotho-zincwadi okanye iphothifoliyo kungenzeka ukuba ayiphumelelanga ukunyusa abantu abamkeleyo.
I-Cal Poly GPA, i-SAT, kunye ne-ACT Data
IYunivesithi yaseNorthern Texas GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
10 Amazwi Ngamahlombe eSaber-Tooth Tiger
Iintsana kunye neTV: Ngaba Isikrini Sikulungele Ukufumana Omncinane?
Ngaba Izibhokhwe Zibhola Kwizinto Zabantu?
Ukuphuculwa koMnqophiso weMinwe kunye neGunya lokuThutha
I-Denominal (Ifom yeNoun)
Iingcebiso zeSikolo sasehlobo